Maitiro Ekururamisa Anoteerera Anogadzira Email Dhizaini uye Kwaungawana Rubatsiro! | Martech Zone
Zvinotyisa asi vanhu vazhinji shandisa yavo smartphone kuverenga email pane kunyatso fona (isa kutsvinya nezve kubatanidza pano). Kutenga kwevekare mamodheru modhi kwakadonha ne17% gore pamusoro pegore uye 180% vamwe vanhu vebhizimusi vari kushandisa yavo smartphone kuongorora, kusefa, uye kuverenga email kupfuura zvavakaita makore mashoma apfuura.
Dambudziko, hazvo, nderekuti maemail application haana kufambira mberi nekukurumidza sezvinoita mabhurawuza ewebhu. Tichiri kunamatira ne desktop desktop vatengi vakaita seAptlook vanovimba nevakuru HTML kuti vape email zvakanaka. Vatsva email vatengi vanozopa izvo zvazvino vhezheni zveHTML neCSS nemazvo, zvichibvumira zvinoshamisa maemail zviitiko. Izvo hazvisi nyore kutumira email uye kuti ive ichipa mushe musarudzo yakakura yemafoni, mapiritsi, webhu, uye software vatengi.
Izvo zvakakosha kushandisa injini yekuyedza senge Litmus (isu takazvibatanidza needu dhirivhari yekuendesa ne 250ok, mumwe). Inodavirira email mubatanidzwa weyakare-chikoro tafura inotyairwa HTML, CSS, uye nyowani HTML. Iko kumisikidza uye kunyangwe kurongeka kweiyo email kodhi yako kwakakosha kuti ukwidziridze kuverenga pamisika yekutarisa.
Dhawunirodha Mahara Ekuteerera Eemail Matemplate
Kana yako ESP isingapi template inoteerera, kune mashoma zviwanikwa online kuti uwane rubatsiro neanoteerera email.
Zurb - yakaburitsa akateedzana eema mobile-anopindura maemaema matemplate.
Email pane Acid - inopa kumusoro akateedzana emahara emaema templates ekumutsa iwe nekumhanya nekukurumidza sezvazvinogona.
Litmus ine sarudzo yakavakwa na Stamplia iyo iwe yaunogona kurodha pasi pamwe neakabatanidzwa maPSD.
Mailchimp yakaburitsa mamwe anoteerera matemplate paGithub. Uye Respmail yakawedzera kuvandudzwa kwavo.
Kupindura Email Zvishandiso - Unganidzo yezvishandiso uye zviwanikwa zvekuteerera email dhizaini
Themeforest ine sarudzo yakakura yezvipo zvakabhadharwa pamwe chete nemafaira ePhotohop nemirairo.
Sevhisi dzeEndaneti Dhizaini uye Inopindura Kukodha
Vanosimudza - kana iwe uchida dhizaini nyowani kana uine dhizaini inoda kodhi, vanhu vekuUplers vaita basa rakanaka kune vashoma vedu vatengi!
Highbridge - kana iwe uine dambudziko rakasarudzika raunoda rubatsiro narwo, usazeze kusvika!
Highbridge - kana iwe uri weKushambadzira Cloud kana Pardot mutengi uye uchitarisa kuti ushandise nyowani email dhizaini, matemplate, uye akagovaniswa email matemplate, tizivise.
Sevatengesi veemail, dhizaini inoteerera yanga iri musoro unopisa kwemakore anoverengeka sezvo kukura kusingakanganisike kwakaunganidza hutsi. Isu tasvika zvino padanho rekupindura email dhizaini, ISIMAI dhizaini! MuInfiller yazvino infographic, isu takanyora boka rezviitiko zvekubata maziso zvinosimbisa kukosha kwekupa kune vashandisi vefoni nharembozha yako yeemail.
Instiller Email Service Provider yakanyatsovakirwa vamiririri vanopa yakakwana email mhinduro yekugadzira, kutumira uye kurondedzera paemail yakatumirwa kune avo vatengi (zvakare inosanganisira mamwe maturusi ekuendesa uye mukurumbira kutarisa).
Ivo vanhu veLitmus vakaisa pamwechete iyi inonakidza infographic uye inoenderana nenyaya, Iyo Ye-Yekutungamira kune Inopindura Email Dhizaini.
Tags: 250okacqueousemail email mhinduroemail muvakiemail dhizainiemail mamongiemail pane acidemail viewportGitHubinstillerlitmusmailchimpneteffektrespmailinoteerera emailinoteerera email anovakainoteerera email dhizainiinoteerera emaema matemplatezurb